Baarlamaanka Dowladda Puntland oo dib u Ansixiyey Golihii Wasiirada ee ay Xasaanadda kala noqdeen | RBC Radio
Baarlamaanka Dowladda Puntland oo dib u Ansixiyey Golihii Wasiirada ee ay Xasaanadda kala noqdeen
Garoowe(RBC Radio) Madaxweynaha dowladda Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo khamiis ah horgeeyey Baarlamaanka Golihiisa wasiirada ee uu ku dhawaaqay todobaadkii hore ka gadaal markii isla gollahan ay ka waayeen codka kalsoonida 18-Luuliyo.
Waxaa maanta ka qeybgalay fadhiga ,Madaxweyne Gaas iyo in badan oo kamid ah Xukuumadiisa ee uu badankooda dib usoo magacaabay.
Ka hor intaan loo gelin codeynta ayaa qaar kamid ah Wasiirada,Kuxigeenada iyo Wasiir dowlayaasha ay Baarlamaanka hortiisa ka akhriyeen taariikhdooda iyo waayo aragnimadooda siyaasadeed iyo mida maamul.
Madaxweyne Gaas oo khudbad kooban ka jeediyey Gollaha hortooda ayaa sheegay in Puntland marayso xaalad adag una baahan tahay in laga gudbo oo aysan noqon karin mid xukuumad la’aan ah.
Madaxweynuhu waxa uu sheegay in gollaha uu ka kooban yahay Wasiiro ay si fiican isu yaqaanaan Xildhibaanada oo uu ku tilmaamay in looga bartay iney ku shaqeeyaan “Karti iyo Hufnaan” isla markaana daruufo adag kusoo shaqeeyey sidaas darteedna si duudduub ah lagu ansixiyo.
Xildhibaanada maanta ku sugnaa gollaha ayaa gaarayey 64 mudane,waxaana Afhayeenka Baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashi codka u qaaday in la ansixiyo Xukuumadda marka laga reebo Wasiiro dhowr ah oo maqan kuwaasoo dib loogu dhigayo kalfadhiga bisha Oktoobar 2017.
Ugu dambeyn Xildhibaanada ayaa cod aqlabiyad ah oo ka badan kii ay ku rideen Xukuumadda ku ansixiyey ,61-Xildhibaan ayaa codka kalsoonida siiyey,waxaana ka aamustay 3-Xildhibaan mana jirin cid diiday.
Gollaha Wasiirada ayaa ka kooban 53-Wasiir,wuxuu Madaxweynuhu sameeyey isku shaandheyn kadib markii ay waayeen codka kalsoonida ,waxaana lagu soo daray oo keliya Wasiiro gaaraya 4-xubnood.
Shacabka Puntland ayaa si weyn isu weydiinaya dhaqanka Xildhibaanada gollaha wakiilada maadaama gollaha wasiiradu 90%ay yihiin kuwii ay shalay kalsoonida kala noqdeen,maxaa iska badelay sababtii ay shalay shacabka ugu sheegeen ee ahayd in Xukuumadaasi ku fashilantay amniga,dhaqaalaha iyo bixinta adeegyada shaqaalaha.